Seho niavaka tao amin’ny Carlton : nahazo aina vao ireo sanganasan’i Dadah | NewsMada
Seho niavaka tao amin’ny Carlton : nahazo aina vao ireo sanganasan’i Dadah
Par Taratra sur 03/10/2016
Ny fototra tsy miova, fa nampiana ny talentan’ireo tanora mpitendry. Samy faly na ny teny an-tsehatra na ireo mpijery. Mbola mitana ry Dadah sy Fafah…
“Tena nahafaly ahy ny fiaraha-miasa tamin’ireto mpitendry ireto”, hoy i Dadah… Tsy sasatry ny nitodika tamin’ireo mpitendry nanaraka azy sy i Fafah teny an-tsehatra io, nandritra ilay seho izay notontosain’izy ireo tao amin’ny Carton Anosy, ny alin’ny zoma lasa teo. Nentanin’ny mozika ihany koa i Fafah, indrindra tamin’ireo hira nisy ny fandraisana anjaran’ireo tanora mpitendry.
Samy nahatsikaritra ary faly tamin’izany rahateo ireo rehetra nanatrika ny seho. Toa nahazo aina vao ireo sanganasan’i Dadah, izay niova kely noho ny faheno hatramin’izay. Nahenoana feona “violon” taoriana, nanaraka ny “Veloma ry fahazazana”, sns. Teo koa ny angorodaon’i Jahleky, izay nampihoraka ny iray trano. Nanampy ireo ny fiangalian’i Mbola Talenta ny gitara, nanaingo ireo hira nalahatra. Samy nentanin’ny fampiarahana talenta vokatr’izany na i Charle sy i Nary, izay ao amin’ny tarika Mahaleo, aza.
Anisan’ny tena nandrasan’ny maro tamin’ny seho ny fandraisana anjaran’i Inah. Saika nangatahan’ny mpijery famerenana avokoa ireo hira notontosainy, indrindra ny “Tsara tso-drano” sy “Andriamanitra avo”. Nahafaly ny rehetra kosa ny fiverenan’ilay hanihanin’i Dadah ambony sehatra, izay nampiavaka azy ao amin’ny tarika Mahaleo. Tsy nitendry rahateo izy tamin’ny “Rasazy” ka afaka nilalao tsara. Toraka izany ny “Mifanazava”, izay nifanaovan’i Dadah sy Fafah, nanehoan’izy ireo ny feo mikiakiaka.
Fehiny, niara-paly ny rehetra, ary samy afa-po, satria hira 46 be izao no nomanin’i Dadah sy Fafah ary ny ekipany natolotra ny mpankafy tamin’io. Mbola afaka nanjifa ny “DVD” Tafaray samy tia”, novokarin’ny mi’Ritsoka Production rahateo izy ireo.